पार्टीमा संघीयता कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सभापतिमा मेरो उमेदबारी - sambahak
Home अन्तरबार्ता पार्टीमा संघीयता कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सभापतिमा मेरो उमेदबारी
तपाइँको परिचय दिनुहोस् न?
मेरो नाम जनक खत्री। चाँगुनाराय नगरपालिका ८ सुडालमा बस्छु।
राजनीतिमा कहिले देखि लाग्नु भयो नि ?
म बिद्यालय स्तरबाट नै राजनीतिमा लागेको हुँ। बिद्यार्थी संगठनमा बसेर काम चाहिँ गरिन।नेपाली कांग्रेसको अग्रज नेताहरूको संगतले बी पि कोइरालाको बिचारबाट प्रभाबित भएर नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा जिम्मेबार पदमा राजनीति गरिरहेको छु।
उमेर त त्यति भएको छैन।तर पार्टीको जिम्मेबार पदमा बसेको छु भन्नू भयो। कुन पदको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ नि ?
म भर्खर २९ बर्षको भएँ। म २४ बर्षको हुँदै अघिल्लो१३ औं महाधिबेशन अन्तर्गत भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय सचिबमा मनोनित भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु।
मैले भन्नै पर्दा पार्टीबाट कम उमेरमा क्षेत्रीय सचिब पद सम्हालेको हुँ।
सानै उमेरमा पार्टीले कसरी पत्यायो त त्यो पदकोलागि ?
म जुन क्षेत्रमा लाग्छु लगनशिल भएर लाग्ने गरेको छु र सफल पनि भएको छु। सानै उमेरदेखि पार्टीको संगठन बिस्तार र सुदृढीकरणमा लागेकोमा पार्टीले मुल्याङ्कन गरेर क्षेत्रीय पदमा योग्य छ भनेर जिम्मेबार दिएको हो। त्यो जिम्मेबारीलाई मैले पूर्णत बहन गरेको छु।
राजनीतिलाई कसरी हेर्नू भएको छ ?
राजनीतिलाई मैले समाजसेवाको रुपमा लिएको छु।
तपाईं राजनीतिलाई समाजसेवा भन्नू हुन्छ।यहाँ त राजनीतिलाई पेशा बनाए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।तपाईं अन्य पेशामा पनि सहभागी हुनुहुन्छ र ?
राजनीतिलाई पेशा बनाए भन्ने केही हद सम्म साँचो पनि हो। त्यस्तो ब्यक्तिको पहिचान गरेर पार्टीको जिम्मेबार पदबाट बर्हिगमन गराउन पर्छ। पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र त्याग गर्नेलाई जिम्मेबार पदको जिम्मेवारी दिनु पर्छ। म राजनीति बाहेकको सफल ब्यबसायिको रुपमा पनि परिचित छु। मैले नीजि बिद्यालय सञ्चालन गरेको छु। शहकारीको संस्थापक अध्यक्ष देखि नेफ्स्कूनको सञ्चालक सदस्य सम्म भएर शहकारी अभियान्ताको रुपमा परिचित छु भने कृषि क्षेत्रको बिकासलाई अघि बढाउनु पर्छ भनेर पनि लागि परेको छु। मैले पशुपालन ब्यबसायको बिकासकालागि उन्नत जातको बाख्रा पालन ब्यबसाय पनि गरिरहेको छु। त्यसैले मैले राजनीतिलाई पेशा बनाईरहनु पर्ने अबस्था छैन।
यति सानो उमेरमा राजनीति र ब्यबसायमा सफल हुनुहन्छ । समय चाहिँ कसरी मिलाउनु हुन्छ नि ?
सफल बन्न लगनशिल हुनु पर्छ।सानो ठूलो उमेरले छेक्दैन। समयको ब्यबस्थापन चाहिँ गर्न जान्नु पर्छ। त्यहि समयको ब्यबस्थापनले धेरै तिर सफल भएको हुँ। ब्यबसायलाई भन्दा राजनीतिलाई बढी समय दिएको छु।
भक्तपुरमा चौधौं महाधिबेशन अन्तर्गत सबै वडाहरूमा वडा अधिबेशन सम्पन्न भईसकेका छन्। अब के गर्दै हुनुहुन्छ ?
भक्तपुरका सबै ३८ वटै वडाहरूमा अधिबेशन सम्पन्न भईसकेका छन्। वडा समितिहरूमा नयाँ कार्यसमितिले काम गर्न थालिसकेका छन्। वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन भईसकेका छन्। आफू क्षेत्रीय सचिबको जिम्मेबार पदमा रहेकोले वडा अधिबेशन समपन्न भएपश्चात नगर अधिबेशन गराउन र प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर क र ख अनि क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिबेशनको तयारी गरिरहेका छौं भने जिल्ला अधिबेशनका लागि सहयोग गरिरहेका छौं।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनीय भन्नू भयो। यिनको काम केहोरु तपाईं नि क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउनु भयो र ?
हो म पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएको छु। क्षेत्रीय प्रतिनिधिको काम भनेको केन्द्रीय सभापति सम्म चुन्नु हो भने नगर सभापति , क्षेत्र, प्रदेश ,जिल्ला र केन्द्र सम्म सबै पदहरूमा दाबी गर्न सक्छ। भन्नाले मतदान मात्र है उमेदबार बन्ने अधिकार पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधीमा हुन्छ।
मतदान मात्र हैन उमेदबार बन्ने अधिकार हुन्छ भन्नू भयो। तपाईं पनि उमेदबार बन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। कुन पदमा दाबी गर्दै हुनु हुन्छ नि ?
तपाइँले भनेको कुरा ठिक हो। म पनि चौधौं महाधिबेशन अन्तर्गत भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा ूकू ९चाँगुनारायण०को सभापति पदमा दाबी गरेको छु।
सभापतिकोलागि पार्टीले पत्याउला ररु के का लागि सभापतिमा दाबी गर्दै हुनु हुन्छ ?
पार्टीले कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो। मैले क्षेत्रीय सचिब भएर काम गरेकोबाट पनि पार्टीले सहि मुल्याङ्क गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पदको जिम्मेवारी अनुसार त अझ क्षेत्रीय सभापतिमा दाबी गर्नु पर्ने हो। तल्लो तहमै रहेर एक कार्यकाल संगठन सुदृढीरणका लागि प्रदेश सभा ूकू को सभापति दाबी गरेको हुँ। देश संघीयतामा गईसकेपछि नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिबेशन सुरु भईरहेको छ। देश संघीयतामा गएपनि पार्टीभित्र त्यो देखिएको छैन।पार्टीमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि मेरो उमेदबारी सभापतिमा दिन लागेको हुँ। पार्टीमा युवाहरूको प्रतिनित्व खड्किएकाले पनि मेरो उमेदबारी रहेको हो।
तपाइँलाई आफ्नो दाबी गरेको पदमा सहमति होस भन्ने लाग्छ कि निर्बाचन?
हामीले भक्तपुरका ३८ वडा मध्य ३४ वडाहरूमा सहमतिमा वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनीधिहरू चयन भए भने अन्तिम बिकल्पको रुपमा लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप ४ वटा वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधीहरू निर्बाचित भए। हाम्रो क्षेत्रमा सबै वडाहरू सहमतिमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू छान्न सफल भयौं। नगर, प्रदेश र क्षेत्र पनि सहमतिमै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। यसकालागि बार्ताहरू गरिरहेका छौं। मेरो उमेदबारी पनि प्रदेश सभा क (चाँगुनारायण) कार्यसमितिको सभापतिमा भएकोले सबैसँग बार्ता गरिरहेको छु। मेरो कामको मुल्याङ्कन हुन्छ भन्ने लागेको छ। सहमतिमै सभापति बन्नेछु भन्ने लागेको छ। अन्तिम सम्म सहमति भएन भने लोकतान्त्रीक पद्दति अनुरुप निर्बाचनमै जानेछु।
हामी आफ्नो घर मिलाउँदैछौं। सहि मुल्याङ्कन गरेर सहि जम्मेबारी बहन गरौं। निर्बाचन भन्दा सहमतिमै अधिबेशन सम्पन्न गरौं। अन्तिम बिकल्प निर्बाचननै भएपनि स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरौ।
Previous articleभक्तपुरबाट छ जना लागुऔषध कारोबारी पक्राउ
Next articleयौन प्यास मेटाउन भन्दै थिमीमा १३ वर्षिया बालिका वलात्कार गर्ने पक्राउ